Global Aawaj | खुले सबै होमस्टे खुले सबै होमस्टे
४ कार्तिक २०७८, बिहीबार
खुले सबै होमस्टे
२४ आश्विन, २०७८
लमजुङ । कोभिड–१९ को जोखिमका कारण बन्द रहेका लमजुङका होमस्टे गाउँहरू खुलेका छन् । कोरोना सङ्क्रमण दर कम भएपछि सबै पर्यटकीय गाउँ पर्यटकका लागि खुला भएको छ ।
राइनास नगरपालिका–९, राइनासकोट सामुदायिक होमस्टेका अध्यक्ष खड्कबहादुर गुरुङका अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर होमस्टे खुला गरिएको हो । राइनासकोटमा केही पर्यटक आउन थालेका छन् । होमस्टेका उपाध्यक्ष विष्णुमाया गुरुङका अनुसार गाउँ आउन चाहने पर्यटकलाई स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन भनिएको छ । क्व्होँलासोंथर गाउँपालिका–३ स्थित घलेगाउँ पनि पर्यटकका लागि खुला गरिएको छ । गाउँमा हाल ३० देखि ४० जनासम्म पर्यटक आउने गरेका छन् । पर्यटन व्यवस्थापन समिति, ग्रामीण पर्यटन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर घलेका अनुसार गाउँ खुला गरेपछि दैनिक पर्यटक आउन थालेका छन् ।
पर्यटक र स्थानीय दुवैले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएका छन् । होमस्टे आउने प्रत्येक पाहुनाले मास्क लगाउनुपर्नेछ । होमस्टे सञ्चालकले पनि लगाउनुपर्ने छ । थर्मल गनमार्फत ज्वरो परीक्षण गरिनेछ । साबुनपानीले हात धोएर, सेनिटाइजर लगाएर मात्र गाउँ प्रवेश गराइनेछ । सबै स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा भएपछि मात्र गाउँमा प्रवेश दिइएको होमस्टे सञ्चालकले बताएका छन् ।
बेँसीसहर नगरपालिका तीज काउलेपानी सामुदायिक होमस्टेका अध्यक्ष देवबहादुर गुरुङका अनुसार दशैँ लागेलगत्तै गाउँ खुला गरिएको छ । आन्तरिक पर्यटक आउन पनि थालेका छन् । करिब दुई वर्षपछि होमस्टे खुला गरिएको उहाँले बताउनुभयो । कोरोना सङ्क्रमण दर केही कम भएपछि होमस्टेमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक प्रवेशमा खुला गरिएको हो । समितिको निर्णयअनुसार दशैँसम्मका लागि पारिवारिक प्याकेज खुला गरिएको छ । दशैँको पूर्णिमापछि सामुदायिक प्याकेज पनि खुला गरिने उनले बताए ।
होमस्टेका सचिव जगत गुरुङका अनुसार पारिवारिक प्याकेजमा सरकारी कार्यालयका कर्मचारी, व्यापारी आउने गर्छन् । परिवारको साथमा बिदा मनाउन र दशैँ मनाउनका लागि नजिकै पर्ने भएकाले धेरैले काउलेपानी जाने गरेका छन् । लमजुङका अन्य पर्यटकीय गाउँ सिउरुङ, तुर्लुङकोट, खासुर, भुष्मे, नरुवल, खानीगाउँ, घनपोखरा, पसगाउँ, मिप्रा, तार्कुलगायत गाउँका होमस्टे पनि खुला गरिएको स्थानीयवासीले बताएका छन् ।
बाढीपहिरोको अनुगमन गरेर थप राहतको व्यवस्था हुन्छः प्रधानमन्त्री
महिला मेयर कप : राष्ट्रिय खेलाडी प्रेरित बागमतीको विजयी सुरुआत
बाग्मती प्रदेशसभाको बैठक अन्याेलमा, एमाले सांसद अनुपस्थित हुने
सीडीओ र एसपी तासमा मग्न भिडियो सार्वजनिक भएपछि…
अवरुद्ध सिद्धार्थ राजमार्ग चालु
नाम्खाको तुम्लिङमा फसे चार विदेशीसहित १२ जना
बुटवलमा काटेर राखिएका ३० हेक्टर क्षेत्रफलको धान बाली क्षेति
पप्पु कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरेको कमला नदी पुलको अर्को स्पान पनि भासियो
‘सन् २०२२ सम्म कोभिड महामारी’
पुरानै लयमा फर्किदै छ बेनी बजार
सीता मृत्यु प्रकरण: ४५ दिनपछि शव उठ्यो, बुटवलस्थित मगरघाटमा दाहसंस्कार
५० वर्ष पूरानो बस्ती मासेर स्थायी राजधानी बनाउँदै लुम्बिनी सरकार
नारायणगढबाट बुटवलतर्फ आउँदै गरेको बस दुर्घटना, १६ जना घाइते
गीताको आधार : श्रीमानको मोबाइल व्यापार
रुपन्देहीमा ३१ वर्षीया महिला ९ वर्षीय छोरासहित वेपत्ता
बुटवलबाट गुल्मी आएको जीप खोलाले बगायो
पाल्पा-बुटवलको यात्रा, जात्रै जात्रा !
मोतीपुर घटनाको एक सातापछि अभियुक्त पक्राउ, ब्यानर तथा नामावलीसहितका कागजात बरामद
रुपन्देहीमा २५ अर्ब होटलमा लगानी, महामारीले व्यवसाय धरासयी
बुटवलमा टिप्पर दुर्घटना : दुई जना घाइते, एकको अवस्था गम्भीर
टिकटक र सेल्फी स्वार्थमा हराएको मानवता, बुटवलको सिद्धेश्वर मैदानमा जे देखियो…
बुटवल मोतीपुर झडप : मृत्यु भएका तीन जना गैरसुकुम्बासी
विवाहको एकमहिना नपुग्दै होटलमा मृत फेला परिन् रुपा
Phone No. :- ०७१–४१५३०३,९८०१९४०७७५/९८०१९४०७७७
बाढीपहिरोको अनुगमन गरेर थप राहतको व्यवस्था हुन्छः प्रधानमन्त्री महिला मेयर कप : राष्ट्रिय खेलाडी प्रेरित बागमतीको विजयी सुरुआत बाग्मती प्रदेशसभाको बैठक अन्याेलमा, एमाले सांसद अनुपस्थित हुने सीडीओ र एसपी तासमा मग्न भिडियो सार्वजनिक भएपछि… अवरुद्ध सिद्धार्थ राजमार्ग चालु नाम्खाको तुम्लिङमा फसे चार विदेशीसहित १२ जना बुटवलमा काटेर राखिएका ३० हेक्टर क्षेत्रफलको धान बाली क्षेति पप्पु कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरेको कमला नदी पुलको अर्को स्पान पनि भासियो ‘सन् २०२२ सम्म कोभिड महामारी’ पुरानै लयमा फर्किदै छ बेनी बजार विश्वकै सबैभन्दा लामो लकडाउन आजदेखि खुल्दै हात्ती आक्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारलाई दश लाख धान डुब्यो, गहुँ लाउने आश मर्‍यो बुद्धको महापरिनिर्वाण भएको कुशिनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भारतमा नौ महिनामा एक अर्बले लगाए खोप नेपाली फिल्म ‘एक्सन नाइन’मा सुनिल शेट्टीको इन्ट्री महिला मेयर कप आजबाट, उद्घाटन खेलमा महालक्ष्मी र बागमती भिड्दै प्रधानमन्त्री देउवा आज कर्णाली र सुदूरपश्चिमको निरीक्षणमा जाँदै अलपत्र पर्यटकको उद्धार गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन चितवनको ३० प्रतिशत धानबालीमा क्षति